C/llaahi Yuusuf iyo wefti uu hogaaminayo oo soo gaadhay madasha shirka ee Nairobi.
Madaxweynaha Puntland C/llaahi Yuusuf Axmed.
Laascaanood, 16 Jun 2003 — Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland C/llaahi yuusuf Axmed iyo wefti uu hogaaminayo ayaa shalay soo gaadhay madasha shirka dib u heshiisiinta soomaalida uga sucda duleedka magaalada Nairobi.
C/llaahi Yuusuf iyo weftigiisa ayaa markii ay soo gaadheen madasha shirka ayaa waxaa laga dareemayey farxad iyo rayn rayn.
Weftiga uu hogaaminayey madaxweynaha Puntland C/llaahi Yuusuf Axmed oo uu ka mid ahaa Gen Cade Muuse Boqor oo ahaa ninkii hogaaniyey mucaaradka Puntland,waxaa kaloo iyana safarkooda ku weheliyey siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada koonfureed ee soomaaliya,kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Hilowle Iimaan Cumar, Danjire Cabdillaahi Ismaaciil,iyo Gamca Dheere.
Waxaa isla markii ay soo gaadheen madasha shirkaba ay ragaasi ka jeediyeen qudbado hoolka shirka,,iyagoo ka waramay hawlihii ay soo qabteen intii ay ku sugnaayeen Puntland,iyo sida ay u taageersan yihiin inuu midho dhalo shirkani.
C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu ka mid yahay ilaa rag kor u dhaafay 20 musharax oo mid walaaba uu isu taagay inuu noqdo madaxweynaha wadanka Soomaaliya,musharaxii ugu danbeeyey ee isa sharaxaana waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Jeylaani Cali Kediye.
Waxyaabaha lagu heshiiyey ee ilaa iyo hada la taaban karo waxa ka mid ah in golaha barlamaanka uu noqon doono 450 xubnood, dawlada la dhisi doonaana waa inay noqotaa dawlad aan awood weyn lahayn oo federal ah,taasoo ay awooda yeelan doonaan dawlada goboleedyadu.
Dhanka kale waxaa shalay uu gacan qaad dhex maray gudoomiyaha barlamaanka dawlada ku meel gaadhka ah Cabdalla Deerow Isaaq iyo ku xigeenkiisa,taasoo si cad u muujinaysa kala qaybsanaanta foosha xun ee ka dhex taagan TNG-da,iyadoo maalmo dhowyd la sheegay in la xaliyey khilaafkii ka dhexeeyey dawlada.
Booliiska magaala da Laascaanood oo qabqabtay gawaadhi ka badan 90 gaadhi.
Cashuur ururintii oo si xawli ah u socota magaalada Laascaanood.
Laascaanood, 16 Jun 2003 — Booliiska magaalada Laascaanood oo ay taageerayaan ciidamada daraawiishta ee Puntland iyo madax ka socota dawlada hoose ayaa hawl gal weyn oo horey loo iclaamiyey ku qaaday meelo badan oo ka tirsan magaalada Laascaanood.
Waxaa ay booliisku isla maalinkaasba qabteen gawaadhi gaadhayey ilaa 90 gaadhi,kuwaasoo isugu jirey gawaadhida yar yar iyo kuwa waaweynba,gawaadhidaas oo ka dhega adaygay digniin horey loogu digay inay qaataan warqada cashuurta,oo ka bixiyaan cashuur gawaadhida ay wataan,hadii ay sidaas yeeli waayaana laga qaadi doono talaabo arintooda waafaqsan.
Talaabadan ay ciidamadu sameeyeen ayaa ah arin ku cusub gobolka Sool,iyadoo ay dadka ku dhaqan gobolku aanay habayaraatee wax cashuur ah bixin jirin ilaa iyo intii ay burburtay dawladii ugu danbeysey ee Siyaad Barre.
Talaabadan ay qaadeen ciidamadu ayaa waxay quus gelinaysaa dad badan oo ka caga jiidayey inay bixiyaan cashuurta xaqa loogu leeyahay,dadkaas oo u badan dadka hantida haysta iyo kuwa aanba iyagu aqoonsanayn Puntlandba amaba u xagliya dhinaca Somaliland.
Madaxda booliiska gobolka Sool iyo kuwa dawladaha hoose ayaa ku hanjabay inay talaabo taas ay shalay qaadeen mid la mid ah ay ka qaadi doonaan qof kasta oo cashuurta bixin waaya.
Shir balaadhan oo lagu soo afjarayo xurgufta u dhexaysa beelaha wada dega gobolka Sanaag oo lagu qabtay magaalada Ceerigaabo.
Laascaanood, 16 Jun 2003 — Shir aad u balaadhan oo laba geesood ah oo,ayaa ka dhacay Jimcihii aan soo dhaafnay badhtamaha magaalada Ceerigaabo, meesha loo yaqaan beesha Xoriyada.
Shirkaas oo ay soo qaban qaabiyeen odoyaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag ayaa shirkaas wuxuu ajandihiisu ahaa sidii loo soo afjari lahaa saan saanta colaadeed ee beryahanba ka aloosnayd meelo ka mid ah gobolka Sanaag,iyo in laga hor tago inta ayan xabadu qoriga afkiisa ka bixin.
Shirkan ayaa sida wararku nagu soo gaadhayaan wuxuu ku yimid kadib markii labada beelood oo dega gobolku ay heshiis nabadayn ah kala saxeexdeen bilowgii sagaashameeyadii,heshiiskaas oo qeexayey in dhamaan la isu celiyo hantidii ma guurtada ahayd ee beelaha u kala gacan gashay xiligii dagaalka sokeeye,arintaas oo ay dhegaha ka furaysteen qaar ka mid ah beesha ka soo jeeda waqooyiga gobolka Sanaag.
Waxaa madasha shirka isla maalinkiiba laga doortay 3 gudi oo gudi kasta loo xil saaray arin khaas ah.Gudiyadaas oo kala ah
1-Gudiga Qabanqaabada oo kala ah:
Caaqil Xuseen Aadan Cade
Eng Siciid Maxamed Cilmi
Maxamed Xaaji Ibraahim Cadeed
Cabdi Xuseen Jaamac mataan
Xuseen Cabdi Nuur
Cumar Jaamac Cabsiiye
1-Gudiga Xaqiiqo raadiska oo kala ah:
Cabdirashiid Axmed Warsame.
Yaasiin Axmed Cabdulle.
Maxamed Nuur Jaamac
Yuusuf X. Cabdi
Saleebaan Cassan Cali
Cabdinuur Xaaji Geele
Yuusuf Axmed Nuur
Cali Xaaji Aadan
1-Gudiga odayaasha oo kala ah:
Caaqil Maxamed X. Cabdi.
Caaqil Maxamed Xassan Maxamed.
Caaqil Maxamed Faarax Maxamed.
Caaqil Xuseen Aadan Cade.
Warsame Caarshe Faarax
Saleebaan Xassan Cali Xaliye
Maxamed Axmed Seeraar
Gudiyadaas la saaray ayaa mid walba waxa uu hawshiisa geli doonaa xiliga ku haboon iyadoo hawsha oo dhan la rajaynayo insha,alaah in dhowaan la dhamayn doono.